မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: တရားဝင်... ကျပ်သိန်း ၅၀ တရားမဝင်က...??? “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
တရားဝင်... ကျပ်သိန်း ၅၀ တရားမဝင်က...???
ဒု သမတရဲ့လစာ ကျပ် သိန်း ၄၀ ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေက ၃၅ သိန်းစီနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ၃ သိန်း ခံစားခွင့် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလစာ သတ်မှတ်ချက်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရလို့ ဆိုပေမဲ့ အခုမှ သိခွင့်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 5:54 AM